Jimco, Juun 1, 2016 Douglas Karr
Sawir-gacmeedkan ka socda Dukaanka Smart wuxuu ka hadlayaa mustaqbalka is-dhexgalyada isticmaaleyaasha ee ka baxsan shaashadda taabashada. Waxaa laga yaabaa in adeegsadaha ugu horumarsan ee isticmaala ee aan maanta isticmaalayo Apple Watch. Isku-dhafka taabashada badan, cadaadiska, badhannada, iyo garaacisyadu way adag yihiin. Iyo farahayga waaweyn, had iyo jeer maahan khibrad aan xuduud lahayn. Waxaan ku faraxsanahay mustaqbalka! Isdhexgalka Isticmaalaha Mustaqbalka iyo Isdhexgalka Dukaanka Smart wuxuu soo bandhigayaa tiknoolajiyada qaarkood oo qarka u saaran inay beddelaan isdhexgalka isticmaalaha: Holographs - Microsoft